Bra sy panty 730: Mpangalatra atin'akanjo Serial voasambotra tany Japon
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Bra sy panty 730: Mpangalatra atin'akanjo Serial voasambotra tany Japon
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Kolontsaina • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny tranga toa hafahafa amin'ny halatra atin'akanjo dia tena tsy fahita any Japon.
Lehilahy iray no nosamborin'ny polisy japoney satria nangalatra bras sy panty.
Lehilahy nangalatra ny atin'akanjo vehivavy tamin'ny laundromats.
Tao an-tranon'ireo ahiahiana no nahitan'ny polisy ny atin'akanjo atin'akanjo 730.
Voasambotry ny polisy tao an-tanàna atsimon'i Beppu, Japoney, noho ny fiampangana azy nangalatra akanjo anatiny 730 tamin'ny lamba fanasan-damba, rehefa avy nitatitra ny mpianatry ny oniversite 21 taona fa nanjavona avy tao amin'ny toeram-panasan-damba ny mpivady enina.
Beppu Nisava ny tranon'i Tetsuo Urata, 56 taona, ny polisy ary nilaza tamin'ny haino aman-jery fa "tsy mbola naka an-trano panty marobe toy izany izy ireo nandritra ny taona maro."
Nalain'ny polisy ny atin'akanjo atin'akanjo 730 nandritra ny fikarohana, izay narahina fiampangana an'i Tetsuo tamina mpianatry ny oniversite vehivavy 21 taona tsy fantatra anarana. Nolazainy tamin'ny polisy fa i Tetsuo dia nanangona paosy enina tao anaty lamba fanasan-damba tamin'ny 24 aogositra.
Voalaza fa niaiky ny nangalatra ny atin'akanjo lava be hita tao amin'ny tranony ilay voampanga.
Ny tranga toa hafahafa amin'ny halatra atin'akanjo dia tena tsy dia fahita loatra Japana.
Tamin'ny volana martsa, Takahiro Kubo, herinaratra 30 taona, dia notendren'ny manampahefana ho nangalatra atin'akanjo sy akanjo ba 424 tamina tovovavy tanora tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Saga.
Tamin'ny taona 2019, nahitan'ny polisy zavatra mihoatra ny 1,100 ny atin'akanjo vehivavy voatazona tamin'ny tranga futon taorian'ny nanafika ny tranon'i Toru Adachi tao amin'ny prefektioran'ny Oita, olona iray hafa ahiahiana mpangalatra atin'akanjo japoney.